लिपुलेककाे नेपाली आकाशमा भारतीय लडाकु विमान किन उड्दैछ? – PathivaraOnline
Home > समाचार > लिपुलेककाे नेपाली आकाशमा भारतीय लडाकु विमान किन उड्दैछ?
काठमाडौ । भारतले केही दिन यता नेपाली भूमि माथि लडाकु विमानले गस्ती सुरु गरेको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अतिक्रमण गरी सैन्य अखडा बनाएको भारतले ति क्षेत्रका आकासमा लडाकु विमानले गस्ती सुरु गरेको हो । चीनसंग लद्दाकमा फेरी समस्या सुरु भएपछि भारतले केहि दिन यता उक्त क्षेत्रमा सुरक्षा ब्यवस्था थप कडा बनाएको छ। नेपाली भूभागसहित मिलम क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा संयन्त्रहरु उच्च सर्तकतामा रहेको छ ।
र चीन सीमा नजिक भारतीय लडाकु बिमानले मंगलवार र बुधवार दुई पटक उडान भरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्। लिपुलेक पछि मिलम क्षेत्रमा पनि सुरक्षा बलको तैनाथी बढाइएको र लद्दाखमा चिनिया सैनिकहरुको घुसपैठ प्रयास पछि सुरक्षा संयन्त्रहरु विशेष सतर्कता अपनाइरहेको भारतीय दैनिक पत्रिका अमर उजालाले दाबी गरेको छ।
‘सीमा क्षेत्रमा गस्ती बढाइएको छ,’ उसले बिहीवार लेखेको छ,‘हवाई मार्गबाट पनि भारतीय सेना सीमाको निगरानी गरिरहेको छ।’दार्चुलाको व्यास क्षेत्रमा हवाई गस्ती सुरु गरेको छ । नेपालको आकासमा आजभोली दिनहुँ चार पाँच पटक भारतीय वायु सेनाको जेट लुडाुकु विमानले उडान भर्ने गरेको स्थानियले बताएका छन् ।
उता कृष्णको खुट्टा जोडियो यता बुवाको २ हात जलेर दर्दनाक अवस्था, ओमनमा बेचिएपछि छोरीको पनि यस्तो हाल (भिडियो)